Waqtiga Akhriska: 5 daqiiqo aad wada ogsoon Sida, Venice waa magaalada ugu gaara farxad ee Yurub oo dhan, haddii aanay dunidu. Talyaaniga ayaa waxaa sameeyey oo gebi ahaanba ka mid ah kanaalada iyo aayado yar, kuwaas oo dhammaantood ku seexanaysaa jasiirad. Tani waxay magaalada ka dhigtay mid ka mid ah…
Waqtiga Akhriska: 4 daqiiqo Europe soo saarta oo gubtay, lacagta ah oos kafeega, waxa ay leedahay Dukaamada ugu fiican iyo makhaayadaha ee Europe. Waa Mecca kafeega jecel iyo saraaxad, wax weyn ka badan oo kaliya in. dhaqanka Cafe waa daaqad dunida. Waxaan doondoono…
Waqtiga Akhriska: 5 daqiiqo Naples waa ku yaab ah, magaalada Talyaani ka sugayeen. Waxaa lagu buuxiyey hills, dhismayaasha qadiimka ah, iyo yaabab yar iyo cute kale. Waxaa muhiimad ahaan waa magaalada ugu fiican Talyaani ee qof kasta oo raba in ay la kulmaan ruuxa dhab ah Talyaani iyo safarada maalinta ugu wanaagsan ee ka Naples. Si kastaba ha ahaatee,…
Waqtiga Akhriska: 5 daqiiqo Florence waa meel la yaab leh in tiirka iyo waxaa jira in la sameeyo tons. laakiin, haddii aad raadinayso in ay u ganay ka baxsan caasimada this, waxaan ku helay kugu daboolay. Waxaa jira qaar ka mid ah meelaha la yaab leh si ay u booqasho in ay yihiin oo keliya tareenku ka Florence iska. halkan…
Waqtiga Akhriska: 4 daqiiqo Waa ay adag tahay in ay doortaan kaliya 5 Maalinta Easy safarada From Milan By tareenka si ay u share aad la. caasimada fashion Italy waxaa waari la doorasho ee dalxiiska ee booqanaya. Ma aha oo kaliya waxaa ka buuxda fashion, laakiin waxa ay leedahay taariikh cajiib ah, architecture iyo qurux…
Waqtiga Akhriska: 5 daqiiqo Europe dhiiri fanaaniinta iyo filim oo dunida ku baahsan, sidaa darteed waa yaab ma laha in ay soo jiidata sameeyayaal film si isku mid ah! Baro 5 Meelaha Filimka Caanka ah ee Yurub oo aad u dhigatid ciidahaaga iyo nashaadaadkaaga si aad naftaada ugu quusato filimada aad ugu jeceshahay fasaxa ugu fiican Yurub…
Waqtiga Akhriska: 4 daqiiqo Milan si Rome By tareenka ama Rome si Milan waa waayo-aragnimo fudud oo hufan. In aan ku xuso qurux badan! Waad qaadan kartaa tareen ka jaban kaasoo qaadan kara waqti ka dheer 3 hours but that Trains from Milan to Rome allows you to jump off at…
Waqtiga Akhriska: 4 daqiiqo Europe waxaa ka buuxa qaar ka mid ah Waddooyinka Most Beautiful. From ugu qatarsanaa oo midabo si aan caadi ahayn u. Qaar ka mid ah Most Beautiful Waddooyinka In Europe waxaa hore u helay oo si fiican u habaysan on track dalxiiska, laakiin kuwo kale ay dhab qarsoon GEMS in kaliya…